रविले दिए यागेशलाई एक मिनेटमै जादु गर्ने मन्त्र!
August 1, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on रविले दिए यागेशलाई एक मिनेटमै जादु गर्ने मन्त्र!
हिजो देखि नेपालमा चर्चा छ त नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको यत्र तत्र सर्वत्र उनकै चर्चा र बधाइले भरिएको छ । सबैले स्विकारेका छन् कि हिजो देखि उनको वास्तविक परिक्षा सुरु भएको छ । चारैतिर बाट बधाइ आउने क्रममा चर्चित संचारकर्मी रवि लामिछानेले पनि नव नियुक्त मन्त्री भट्टराईलाई बधाइ दिएका छन् ।यो खबर otv.comमा प्रकाशित […]
August 1, 2019 August 1, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on प्रचण्डपत्नी सीतालाई निको नहुने रोग लागेको खुलासा..हेर्नुहोस् यस्तो रोग रहेछ।
नेपाल तथा सिंगापुरको अस्पतालमा उपचार गराएरसमेत स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि प्रचण्ड परिवारसहित पाँच महिनाअघि अमेरिका पुगेका थिए । अमेरिकाको जोन हकिङ्स् अस्पतालमा उपचार पश्चात उनलाई निको नहुने रोग प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी (पीएसपी) लागेको पत्तो लागेको थियो ।यो खबर हाम्रो इकोनोमिमा प्रकाशित छ । सीताले लामो समयदेखि सुगर तथा अन्य दीर्घ रोगहरुको औषधि खाइरहेकी थिइन् । सुगरले […]
असफल भएको महसुस हुनासाथ मन्त्री पद त्याग्छु : भट्टराई
August 1, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on असफल भएको महसुस हुनासाथ मन्त्री पद त्याग्छु : भट्टराई
काठमाडौं । नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले असफल भएको महसुस हुनासाथ मन्त्री पद त्याग्ने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री पद सम्हालेको भोलिपल्ट पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले आफ्नालागि सबभन्दा ठूलो करार सम्झौता त्यही हुने बताए । बिहीबार बिहान तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुस्थित मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘जुन दिन मैले काम गर्न सकिनँ […]
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले देखाए महानता, खोलिदिए ७२ वर्षदेखि बन्द रहेको ‘शिवालय’ मन्दिर
August 1, 2019 Daily News NepalLeaveaComment on पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले देखाए महानता, खोलिदिए ७२ वर्षदेखि बन्द रहेको ‘शिवालय’ मन्दिर
एजेन्सी । पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र भएकै कारण त्यहाँ रहेका अल्पसंख्यकहरुमाथि दमन र अत्याचार हुने गरेको , जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउँने गरेको आरोपहरु लाग्दै आएका छन् । तथापी पछिल्लो समय भने पाकिस्तानले अल्पसंख्यकहरुका लागि पनि अधिकारहरु सुनिश्चित गर्दै आईरहेको छ । त्यसमाथि पनि इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको सरकारले पाकिस्तानमाथिको उक्त छबी पनि परिवर्तन गर्ने कसरतमा […]